Xarunta Puntland oo ay ka dilaacdey arin dadku ay aad u qaylinayaan - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Xarunta Puntland oo ay ka dilaacdey arin dadku ay aad u qaylinayaan
Xarunta Puntland oo ay ka dilaacdey arin dadku ay aad u qaylinayaan oo uu ku fashilmey in Cabdiwelli Gaas wax ka qabto. Duhur cad ayaa moobilada iyo wixii muhiimka layska furanayaa ayadoo ay fuliyaan dhalinyar oo koox kooxo u socda.
Qaylo dhaanta ayaa aad u korodhey waxana fariin loo direy waalidiinta inay ka qaybqaataan sugida amniga Garoowe. Gabdhaha ayaa iyagana loo gaystaa kufsi taas oo kaliftey inay hawshooda gudan kari waayaan.
Mauul u hadley booliiska ayaa cabasho ka muujiyay culimada oo uu sheegay in booliiskii daalac loo raacay kadib markii ay qabteen nin booliiska xabadeeyay, wuxuuna xasuusiyay culimada inay dadka u sheegaan waxa diintu ka qabto qofka dadka dariiqa u istaaga.
Booliiska magaalada ayaa intaa sii raaciyay inay la soo deristay duruufo dhaqaale, gaadiid iyo shidaal iyo xabsiyadii oo diidey inay dadkale jeelka la keeno maadaama intii horeba loo taag laayahay.
Gawaadhida qaar ayaa loo leexiyay dhinaca dagaalka gobolka Sool.